Ngezinye izikhathi usukhathele izitsha kuyinkimbinkimbi futhi multipartite, kodwa ngoba ngezinye izikhathi uqale ukucabanga indlela ukupheka unyaluthi iphalishi ubisi. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi lokhu kuyinkambo aphansi. Noma kunjalo, ukupheka unyaluthi iphalishi ubisi has nezimfanelo ezingavamile zomunye lalo. Kufanele ngaso sonke isikhathi ukuba kubhekelwe. namaqhinga Little kuzosiza ukuba siqonde ukuthi kuhle unyaluthi iphalishi ubisi. Photo of the dish isivele okubangela iphango. Futhi uma uzizwa iphunga layo futhi ukunambitheka - ngeke ube ngumngane azinikele.
Indlela ukupheka unyaluthi iphalishi ubisi? Izinzuzo umkhiqizo
Lokhu ibhali okunomsoco kakhulu futhi unempilo. Ngo unyaluthi amaprotheni kuka e ibhali nelayisi. Ngokusho okuqukethwe phosphorus, ke kuphazanyiswa inyama offal. A i-folic acid has a unyaluthi ibe yisikali efanayo emmbileni nokolweni. Iqiniso lokuthi konke okusanhlamvu abacebile B amavithamini ukuthi ukuncelisa amangqamuzana ezinzwa, hhayi Kuhle kokusho - it is impela yibo bonke abantu. Okuqukethwe zonke lezi izakhi kanye zinc, i-magnesium, i-iodine ne uxhumano lokudlulisa akuzona izinzuzo neligwadulekile unyaluthi iphalishi. Ngaphezu kwalokho, it has a ukunambitheka aphakeme. Millet kuzosiza sigxilisa kubantwana uthando imikhiqizo wokudla. Phela, sekukuhambela kahle ezihlukahlukene izithelo ezomisiwe kanye nezinye izithasiselo esihlwabusayo.
Indlela ukupheka unyaluthi iphalishi ubisi?
Thatha ingilazi wokudla, ezintathu izingilazi zamanzi, isigamu ilitha ubisi, amahlanu amagremu ibhotela, ushukela nosawoti. Imfihlo sokuqala e ngesigezo lesifanele. oluthile lokudla Millet eqhukethe uthuli. Basuke imali kwi izinhlayiya amabele kanye banamathelane lapho kuphekwe. Uma ukubabulala thuli ngalesosikhathi eseqedile okusanhlamvu kuyoba kakhulu crumbly futhi okumnandi okuningi. Ngaphambi ukupheka unyaluthi iphalishi ubisi, kubalulekile ukususa amanzi abilayo izikhathi eziningana. Ngokwesibonelo, ngale ndlela: efakwa ngesihlungo, uthele enkomishini yamanzi abilayo bese wafaka ngaphansi kwamanzi agobhozayo bese ubamba isikhashana. Ngakho izinga wokuhlanza okusanhlamvu zizonikezwa. Ngemva kwalokho kufanele abeke epanini, amboze ngamanzi, engeza usawoti kanye noshukela. Gqoka umlilo futhi noma kunjalo awubhekene isivalo - lokhu kuzovimbela ukuvuvukala ngokweqile futhi viscosity. Musa sishiye amabele phezu kwesitofu zingagadiwe, kumaminithi ayishumi iqala ubilise, kulokhu ukubamba futhi ngokushesha uhlanganise ibhotela. Kufanele uthathe yizicucu amancane futhi basakaza phezu kwamanzi. Kanti futhi kuyasiza ukuqinisekisa ukuvumelana crumbly iphalishi. Ngemva kwesigamu amanzi amathumba kude (futhi lokhu kuzokwenzeka ngo amaminithi ambalwa njengoba amabele ngokushesha okukhulu ubamba amanzi), kubalulekile ukuba uthele ubisi sekuqala ukufudumala. Enye emizuzwini emibili noma emithathu ukuze ubilise futhi cisha. Manje ungafunda ngesivalo futhi ushiye kulesi sikhundla kuze kuphele isigamu sehora. Phakathi nalesi sikhathi ibhali ubamba ubisi kuziwa ukulungela. Kungaba udliwe njengendlela dish ehlukile, noma, isibonelo, isaladi isanqante. Usizo kakhulu futhi okumnandi unyaluthi iphalishi nge imikhiqizo yobisi - yogurt, ephansi fat ukhilimu omuncu, cottage shizi. Lokhu wokudla, kodwa akukho ubisi okuphekwe ayoliswe esincane imifino steamed kungenziwa eyayigcwele Meatless iklabishi imiqulu.
Lokuzaliswa izimbali engadini: Roses zokutshala cuttings